December 2019 – မြန်မာသတင်းစုံ
Warm Bodies =========================== ဒီညတော့ အသေရိုကြရအောင်! Vampire တစ်ကောင်ကိုချစ်နိုင်ပေမယ့် Zombieဆိုရင်ရော ချစ်နိုင်ပါ့မလား? အခုက စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် အလှည့်ပါ။ လူ့ဦးနှောက်တွေစားတဲ့ Zombieတစ်ကောင်နဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းပေါ့။ Zombieတစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Rဟာ သူရဲ့တစ်နေ့တာကို စွန့်ပစ်ခံမြို့က လေဆိပ်ပျက်ထဲမှာ ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်သွားရင် ကုန်ဆုံးလေ့ရှိပါတယ်။ သူ့မှာ Mဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်မဲ့နေတဲ့ သူ့ဘဝထဲကို ဝင်လာတဲ့သူက Julie Julieနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတစ်စု Rတို့နေတဲ့ မြို့ပျက်ထဲမှာရှိတဲ့ ဆေးဝါးတွေကို ယူဖို့ အထက်ကအမိန့်ပေးခံရတယ်။ Julieတို့လည်း အဆောက်အအုံဟောင်းတစ်ခုက ဆေးဝါးတွေကို Read more
The Witch (2015) ============= အိမ်ထောင်ဦးစီး William..၊ သူ့ဇနီးသည် Katherine..၊ သမီးကြီး Thomasin..၊ သား Caleb..၊ အမွှာနှစ်ယောက် Jonas နဲ့ Mercy တို့ မိသားစုဟာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုအပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့နေထိုင်ရာအရပ်ကနေ နှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူတို့မိသားစုဟာ လူသူဝေးရာ တောစပ်တစ်နေရာမှာ အိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်ပြီး စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်လို့ အေးအေးလူလူ နေနေခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီနေရာလေးမှာ အခြေချပြီး မကြာခင်မှာပဲ Katherine က Samuel ဆိုတဲ့ ကလေးလေးကို မွေးဖွားခဲ့သေးတယ်။ Read more
Terlalu Tampan ( 2019 ) Myanmar Subtitles
Terlalu Tampan ( 2019 ) Myanmar Subtitles ဇာတ်ကားလေးကတော့ IMDb မှာလည်း 7.1 အထိရထားပြီး iflix မှာလည်း 8.6/10ထိရထားတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားဆယ်ကျော်သက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအချစ်ဟာသကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှည်ချောပြီးခန့်ညားလှပြီဆိုပြီးအရာရာအဆင်ပြေပြီလို့ထင်ကြတဲ့သူတွေရှိကြပေမယ့် ဒီမှာတော့မျိုးရိုးလိုက်ရုပ်ချောတဲ့အချောကြီးမိသားစုကပေါက်ဖွားလာလို့စော်ကြည်ဘဲဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်…..တွေ့သမျှမိန်းမတိုင်းကသဲသဲလှုပ်ကြလွန်းလို့အပြင်တောင်မထွက်ရဲအောင်ဖြစ်ရပြီး ချောလွန်းလို့ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ကူလင်းတစ်ယောက်…..မိဘတွေနဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူတို့ပေါင်းပြီးဂျင်းထည့်လိုက်လို့ မဖြစ်မနေအပြင်ကျောင်းစတက်ရတဲ့အခါ..လောကကြီးထဲတကယ်စပြီးတိုးဝင်မိတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ကြောက်နေတဲ့အရာတွေ….သူလက်ခံထားတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေ…အားလုံးပြောင်းလဲသွားပါတယ်။တကယ်အဲလိုဖြစ်သွားစေရအောင် ကျောင်းစတက်ကတည်းဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့လဲ…ဘာတွေကအဓိကဖြစ်စေခဲ့လဲဆို တာတော့.လူငယ်အချစ်ဟာသကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ကြည့်ကောင်းစေမှာပါ။ 👇👇👇👇 ဇာတ်ကား​​​ကြည့်ဒေါင်းရန်
တွမ်ဟန့် ပါဝင်သည့် လေယာဉ်မှူးအခန်း Sully (ဖြစ်ရပ်မှန်ရုပ်ရှင်) လေယာဉ်မှူး ဆော်လီရဲ့ လေယာဉ်ဟာ ငှက်အုပ်နဲ့ တိုက်မိပြီး အင်ဂျင်များ ချို့ယွင်းသွားသဖြင့် ဟတ်ဆန်မြစ်ထဲသို့ ဆင်းသက်ခဲ့ရာမှာ ပါသမျှ ခရီးသည် ၁၅၅ ဦးနဲ့ ဝန်ထမ်းအားလုံး အသက်အန္တရာယ် မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ အဲဒီ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် ရိုက်ကူးရာ လေယာဉ်မှူး ဆော်လီ နေရာမှာ မင်းသားကြီး တွမ်ဟန့်က သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ 👇👇👇 ဇာတ်ကား​​​ကြည့်ဒေါင်းရန်
Stay Out Stay Alive (2019) လောကကြီးမှာ ကိုယ်မမြင်နိုင်မတွေ့နိုင်ပေမယ့်လဲ တကယ်ရှိနေတဲ့ အရာတွေ အများကြီးပါပဲ။ ပြီးတော့ အောက်လမ်းအတတ် စုန်းအတတ် မှော်အတတ်တွေဆိုတာကို တချို့သောမျိုးနွယ်စုလူမျိုးတွေက တကယ်ကို ယုံကြည်နေကြပါသေးတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ အဲ့လိုဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ထိတ်လန့်သည်းဖို ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဒွန်နာတို့ သူငယ်ချင်း ၅ယောက်က Campingလုပ်ဖို့အတွက် Golden Summit ဆိုတဲ့တောကို ထွက်လာကြပါတယ်။ အဲ့လိုစခန်းချရင်း မထင်မှတ်တဲ့ ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုကို ကြုံလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်း ဒွန်နာက ညဘက်လမ်းလျှောက်ရင်း Read more
Slither (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး ကြည့်ရဲမှ ကြည့်ကြနော် 😁😁😁 ကြောက်တတ်သူများ နှလုံးရောဂါ အခံရှိသူများ မကြည့်ကြပါနဲ့လို့ ကြိုပြောထားပါရစေ….Slither (2006) သည် သည် IMDb 6.5/10 Rotten Tomatoes 86% Metacritic 69% Google users 83% ဒါရိုက်တာ James Gunn ကိုယ်တိုင်ရေးသားရိုက်ကူးထား၍ Nathan Fillion, Elizabeth Banks, Michael Rooker တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Horror, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်း Read more
Play or Die (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး ထူးဆန်းတဲ့ အိမ်ကြီး တစ်အိမ် ရှိတယ်🏚 တစ်ရက်မှာတော့ ထိုအိမ်ကြီး ထဲတွင်ပြုပြင်စရာများ ရှိတဲ့ အတွက် အလုပ်သမားခေါ်ရာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကိုသာ ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ် အိမ်ကြီးတစ်လုံးတွင် လင်မယား ၂ ယောက်သာရှိပြီး ခြံအကျယ်ကြီး ထဲတွင် အိမ်တစ်လုံး နှင့် လူ ၂ ယောက်သာနေသဖြင့် အမြဲတမ်း တိတ်ဆိတ်နေတက်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ရောက်ရှိလာသောအခါအလုပ်သမားများကို ခြံဝန်းအတွင်းသာ နေထိုင်စေခဲ့ပြီးတစ်ရက်သော အခါမှာတော့ ပိုင်ရှင်လင်မယား ပုံစံမှာထူးဆန်းနေကြောင်း အလုပ်သမားများသတိထားမိခဲ့သောအခါမှာတော့… ရုပ်ရှင်ကားဟာ သွေးထွက်သံယို များပါတယ် Read more